Indle igcwele umgwaqo | News24
Indle igcwele umgwaqo
Ladysmith - Ugcwele amathishi namanzi anendle umgwaqo iSecond Avenue eLimit Hill kanti isakhamuzi sendawo sithe izinto ziba zimbi kakhulu auma izlu likelana njengoba amanzi avele adudule ukugcola kuphume esitamukokweni.
Izakhamuzi zithi seyake yenziwa imizamo yokulungisa izitamukoko ngaphambilini kodwa sekuphele inyanga manje isitamukoko sibanika inkinga.
OLUNYE UDABA: Zilwele amathoyilethi ezaseTshwane
Abantu bazizwa bengaphephile njengoba lesi singesihle ngokwempilo kanti nezingane azisakwazi ukuphumela emnyango ziyodlala ngenxa yokusaba ukugula. Lo mgwaqo umatasa kakhulu kanti lokho kwenza isimo singabi sihle.
Indawo ayisabukeki futhi inuka phu.
Izakhamuzi zithemba ukuthi umasipala uThukela uzoyilungisa le nkinga maduze futhi uyilungise umomphelo, kubika iLadysmithgazette.